Tokony hampiasa vola amin'ny Ethereum ve ianao?
vola / Nataon'i bopilot
Tokony hividy cryptocurrency Ether ve aho izao?
Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka izahay raha tokony hampiasa vola amin'ny Ethereum? Raha jerena manokana dia hojerentsika ny satan'ny sandany ankehitriny, ny fomba fifanakalozana, ny tombony sy ny fatiantoka ary ny fomba ahafahanao miditra ao. Rehefa miresaka momba ny fampiasam-bola, varotra, fividianana na fivarotana eter ny olona iray dia ny farantsakely Etera no resahina. Ny Ether amin'izao fotoana izao no vola faha-7 sarobidy indrindra eo amin'ny tsena manerantany. Toy ny vola hafa maro, dia miovaova be izy io, miova ny sandany isaky ny ora vitsivitsy.
Mandra-pahoviana no tokony hitazomako an'i Ethereum?
Raha mikasa ny hampiasa vola amin'ny mari-pamantarana ianao, toy ny eter, dia mandray dingana lehibe tokoa ianao amin'ny ho avy. Ny antony itadiavanao ity dingana ity dia ny ahafahanao mahazo vola be ao anatin'ny fotoana fohy. Saingy, toy ny fampiasam-bola rehetra, raha mikasa ny hanan-karena ianao dia tsy izao no fotoana mety. Na dia betsaka aza ireo tsy mino an'izany, ireo izay nahazo vola tamin'ny lasa niaraka tamin'i Ether, dia mbola misy mpamatsy vola maro hafa miandry eo an-elatra.
Ohatra, misy ny mpampiasa vola maharitra. Ireo dia olona mividy token ary mitazona azy ireo mandritra ny fotoana maharitra. Ireo dia mpamatsy vola amin'ny andrim-panjakana matetika, izay midika fa hedge fund sy banky. Raha mikasa ny hampiasa vola maharitra ianao dia tokony hividy mividy ethereal, satria iray amin'ireo vola madinika vitsivitsy manana rakitsoratra maharitra miaraka amina modely orinasa voaporofo.
Makà maimaim-poana »$ 10.000« kaonty demo!
Manandrama kaonty demo maimaim-poana izao
Mendrika ny ahiana ve ny mividy Ethereum amin'ny fotoana fohy?
Misy koa ny mpampiasa vola fohy. Ireo dia olona toa ahy sy ianao. Mividy an-trano izy ireo mandritra ny vanim-potoana mafana, mivarotra rehefa mihena ny vidiny. Ohatra, mandritra ny fahavaratra. Ankehitriny, tsy fantatro ny momba anao, fa mbola tsy nahita olona nivarotra etera aho hatramin'ny niakaran'ny vidiny, ka heveriko fa tsy misy io sokajy io.
Ireo mpamatsy vola amin'ny fotoana fohy dia mety ho liana bebe kokoa amin'ireo mari-pamantarana mifandraika amin'ny vola, entana na tahiry orinasa. Ny antony dia satria tsy te-hihazona fananana lava loatra izy ireo. Ny zavatra farany tadiavinao dia ny olona iray mifehy ny volanao amin'ny alàlan'ny proxy.
Raha izao, raha vao mampiasa vola ianao, mety tsy ho io no safidinao voalohany. Na izany aza, raha efa mpampiasa vola ianao ary mahita ny mety ho tonga ao, dia tokony hojerenao izany. Noho ny antony roa izany. Voalohany, noho ny fiakaran'ny vidin'ny ether tato ho ato, dia afaka mahazo tombony izay tsy ho vitanao samirery.
Ny antony faharoa dia ny vokatry ny tambajotra tsy mampino izay noforonin'ireo mpamorona ny Ethereum. Miaraka amin'ny fifanarahana hendry amina paikady vitsivitsy dia azonao atao ny mampitombo ny tombom-barotrao folo heny, ary tsy misy mahasakana anao! Izany dia hahatonga ny fampiasam-bola amin'ny Cryptocurrency hafa saika tsy mety tanteraka. Ity, miaraka amin'ny zava-misy fa ny varotra ether dia saika maimaimpoana ho an'ny mpampiasa, midika izany fa afaka mahita sanda maharitra maharitra amin'ny fampiasam-bola amin'ny zavatra rehetra mifandraika amin'ny tetikasa Ethanolchain ianao.
Inona ireo Tetikasa Ethereum ho avy natsangan'ny mpampiasa vola tsy miankina?
Betsaka ny tetikasa ho avy izay efa natolotry ny mpampiasa vola tsy miankina. Ny iray amin'izany dia antsoina hoe The Alliance Alliance. Ity dia vondrona olona manana harato ambony izay manome famatsiam-bola tetikasa toa ny tetikasa fampandrosoana Ethanolchain $ 1,3 tapitrisa. Raha mitady fomba tsara hanadiovana ny portfolio-nao ianao, na raha mitady hanangana orinasa mampidi-bola manokana ianao, dia angamba tokony hojerenao ny ho avin'ny Ethereum. Amin'ireo tombony rehetra ananany, tsy misy fotoana tsara kokoa noho ny ankehitriny hanombohana!
Ny zavatra iray tokony tsy hataonao dia ny mivoaka ary manandrana mitsambikimbikina. Betsaka ny mpampiasa vola marani-tsaina any izay nanambola be tamin'ny fampiasana Ethereum sy Cryptocurrencies hafa. Mila manao ny fahazotoanao manokana ianao ary manao ny fikarohana alohan'ny hampiasanao vola amin'ny tetikasa manokana. Maro amin'ireo tetikasa haparitaka amin'ny Ethereumchain lehibe no ho ohatra tena tsara azo omena amin'ny fampiasam-bola mahasoa amin'ity teknolojia vaovao manaitaitra ity.
Na dia misy antony marobe tokony hieritreretana momba ny fampiasam-bola amin'ny Ethereum aza, maro ny olona tsy mahalala ny fomba fiasany. Eo indrindra no ilana ny fananana tobim-pianarana manam-pahaizana. Amin'ny fanabeazana ny tenanao momba ny fomba fiasan'ny cryptosystems samihafa sy ny fahitan'ny hoavin'i Ethereum dia afaka mandray fanapahan-kevitra tsara kokoa ianao momba ny vola tianao amin'ny varotra. Ny fampiasam-bola amin'ny sehatry ny fifamoivoizana dia ohatra tsara amin'ny fomba ahafahanao manomboka amin'ny vola kely ary manangana ny làlana mankany amin'ny fampiasam-bola lehibe kokoa.
Raha mitady fampanjariam-bola azo antoka nefa mahasoa ianao izay efa namolavola ny manaraka, dia tokony handinika ny varotra Ethereum ianao. Ny ho avin'ny toekarena manerantany no atahorana ary tokony hifantoka tsara ny tsirairay. Na dia misy tetik'asa maro samihafa any aza izay miasa mba hitondrana vahaolana tsara kokoa amin'ny olan'ny vahoaka eran'izao tontolo izao, tsy mbola nisy na inona na inona afaka niaina ny fiheverana sahady. Azo lazaina fa avy amin'ireto izay tafiditra ao amin'ny indostria fa tsy avy amin'ireo tetikasa ireo. Ataovy ao an-tsaina fa misy antony marim-pototra maro hampiasa vola amin'ny ethereum fa tianao ho azo antoka fa manao ny mety ianao.
Tokony hividy Bitcoin na Ethereum ve aho?
Tokony Hividy ny Ether na Bitcoins ve ianao?
Tokony hividy Ethereum na Bitcoin ve ianao? Ity dia mety ho iray amin'ireo fanontaniana lehibe tsy maintsy hanananao momba ny ho avin'ny famindram-bola manerantany. Ny vola roa dia fahombiazana mamirapiratra ary manana tombony miavaka iray amin'ny hafa: samy nomerika izy ireo fa tsy mifamatotra amin'ny governemanta manokana. Saingy tokony hividiananao ny vola dizitaly raha mikasa hampiasa azy ianao?
Ho an'ny mpampiasa vola marobe, ny sehatra mety indrindra amin'ny vola hendry dia tsy isalasalana fa etera. Natombok'i Vitalik Buterin sy Alex Fork tamin'ny faran'ny volana febroary teo, ny vola etera dia vola niasa toy ny vola nentim-paharazana ihany. Vidinao amin'ny olona fantatrao izany, andoavanao vola amin'ny alàlan'ny fifanakalozana elektronika (toy ny PayPal) ary alefanao any amin'ny adiresy elektronika iray hafa. Amin'ny fanaovanao izany dia ahodinao amin'ny fomba mandaitra ny singa iray an'ny etera ho iray hafa, mitazona ny tombom-bolanao ho tombony ary mampihena ny fatiantoka anao ho fatiantoka.
Raha toa ka tsy dia marina loatra i ether dia marina izany. Nisy tranga maromaro nandritra ny taona lasa izay nitombo ny sandan'ny ether taorian'ny vaovao lehibe. Tamin'ny faran'ny volana janoary dia nitombo 25 isan-jato mahery ny andro taorian'ny fifidianana voafidy ho filoha i Donald Trump. Mpivarotra maro no nahita izany ho famantarana fa ny mpampiasa vola dia miandrandra fiakarana lehibe amin'ny dolara amerikana ary nanararaotra nivarotra ny ether tamina dolara.
Tokony hatahotra ve ianao rehefa mividy Bitcoin na Ether?
Mampalahelo fa rehefa natahotra ny olona ny sandan'ny fampiasam-bola amin'ny vola nomerika dia nanomboka nilatsaka ny vidin'ny ether. Tamin'ny faran'ny volana martsa dia nilatsaka mihoatra ny dimampolo isan-jato izany ary nijanona ho ambany nanomboka teo. Tsy nisy fanondroana fa raikitra ihany ny tsena, ary manam-pahaizana maro no nanomboka naminavina fa hitohy hihena ny vidiny. Raha mieritreritra hampiasa vola amin'ny ether ianao dia mety ho toa fotoana mety hivarotana ity. Saingy tokony ho fantatrao fa mbola afaka mahazo vola ianao rehefa mampiasa vola amin'ity tsena mikorontana ity. Mamakia hatrany mba hahitana ny antony.
Ny fampiasam-bola amin'ny endrika varotra varotra rehetra toa ny etera dia tsy atolotra ho an'ny olona tsy manam-pahaizana amin'ny varotra na mbola mianatra ny tady. Misy sehatra ICO be dia be any izay hamela izay rehetra manana kaonty miditra amin'ny varotra sy hijinja ny tombotsoan'ny token ICO nefa tsy mila mianatra momba ny varotra. Miaraka amin'ny fanamarinana IITJEE sy fahalalana lalina momba ny fomba fiasan'ny varotra, azonao atao ny mividy token ICO ary mampiasa azy ireo hahazoana tombony amin'ny hetsika varotra ataonao isan'andro. Io dia hahafahanao mivarotra tsy misy ahiahy tsy tapaka momba ny fampiasam-bolanao mihombo hatrany.
Koa satria maro ny sehatra ICO eto amin'izao tontolo izao ankehitriny, dia azonao atao ny misafidy izay manome anao ny drafitra fandoavam-bola mahasarika indrindra ary iza amin'ireo no hialana amin'ny vidiny rehetra. Ny vola samihafa dia manolotra tombony samihafa, fa raha manana traikefa amin'ny fampiasana ireo vola ireo ianao hahazoana tombony, dia tokony hampiasa vola amin'ny ether na bitcoins. Ny dingana voalohany dia ny manapa-kevitra ny amin'izay tadiavinao amin'ity paikady fampiasam-bola maharitra ity.
Raha te hamaky momba ny fahasamihafana Bitcoin vs Ethereum dia manolotra ity lahatsoratra manaraka ity aho:
AZA HADINO FA: Ny sasany amin'ireo lahatsoratra dia noforonin'ny Artigence Intelligence ho an'ny tanjona ara-barotra. Tsy izy rehetra no nodinihin'olombelona ka mety misy diso fanazavana diso sy fitsipi-pitenenana ireo lahatsoratra ireo. Na izany aza, tsy natao ireo lesoka ireo ary manandrana tsy mampiasa afa-tsy teny lakile mifandraika izahay ka mampahalala ny lahatsoratra ary tokony hanakaiky ny marina. Amporisihina ianao mba hanamarina hatrany ny fampahalalana avy amin'ny pejy ofisialy na loharano hafa. Ary koa, ny lahatsoratra amin'ity tranonkala ity dia tsy torohevitra momba ny fampiasam-bola. Ny firesahana momba ny hetsiky ny vidin'ny tantara na ny haavony dia fampahalalana sy mifototra amin'ny fanadihadiana ivelany ary tsy manome toky izahay fa misy hetsika na ambaratonga toy izany mety hiverina indray amin'ny manaraka.
Ny sasany amin'ireo rohy amin'ity pejy ity dia mety ho rohy mpiara-miasa. Midika izany fa raha tsindrio ny rohy sy ividiananao ilay entana, dia hahazo komisiona iray aho. Misaotra anao amin'izany!